Banyere Anyị - Ningbo Chuanshanjia Electrical na Mechanical Co., Ltd.
—— CSJ abụwo onye isi na nhazi na imepụta ndọta ọpụrụiche na sistemụ MRI.
Afọ nke ahụmịhe MRI
Ụlọ ọrụ nrụpụta ndọta nke afọ
NingBo ChuanShanJia Electric na Mechanical Co., Ltd. bụ ụlọ ọrụ nkeonwe nke chịkọbara ihe karịrị afọ 20 nke ahụmịhe na teknụzụ resonance nuklia ma gbalịsie ike ịkwalite ngwa nke resonance magnetik nuklia.
CSJ na -eme nyocha n'ime ngwa nke ndọta na -adịgide adịgide, electromagnetic na superconducting technology. Ngwaahịa ya na-ekpuchi onyonyo onyonyo ndọta magnetik (MRI) na coils, sistemụ resonance magnetic resonance nuclear (NMR), sistemụ resonance elektrọnik (EPR), nyocha anụmanụ anụmanụ na usoro ọgwụgwọ, usoro nleba anya ọbara ọgbụgba ụbụrụ nke ala dị ala, sistemụ MRI mkpanaka, Ntinye aka MRI obere nchoputa na usoro ọgwụgwọ yana resonance redio ugboro ole, ngwa ndakwa nri, akụrụngwa ọgwụgwọ plasma, ihe nchebe na -arụ ọrụ maka nnyonye aka saịtị MRI, wdg.
N'ime ọtụtụ afọ, CSJ enwetala mmepe ngwa ngwa site na ike teknụzụ siri ike, ngwaahịa tozuru oke dị elu yana sistemụ ọrụ zuru oke. Ngosipụta nka na ụzụ na nsonaazụ ngwaahịa ndị a emeela nke ọma ma too ọtụtụ ndị ọrụ.
Ningbo ChuanShanJia bụ onye hiwere isi n'ụwa, na-enye nhazi ahaziri iche nke ihe ndọta magnetik resonance na sistemụ, na-enye ngwaahịa na ọrụ dị elu maka ụlọ ọrụ na ụlọ ọrụ nyocha sayensị na ngalaba ahụike, ọrụ ugbo, nri, ihe polymer, mmanụ ala, semiconductor, na sayensị ndụ. .
N'ọdịnihu, CSJ ga -aga n'ihu na -enye uru maka uru nke ya, na -agbaso ụkpụrụ nke "teknụzụ na -eduga, na -eje ozi n'ahịa, na -emeso ndị mmadụ ihe n'ezi ihe, na -achụkwa izu oke" na echiche ụlọ ọrụ nke "ngwaahịa dị ka ndị mmadụ", na gaa n'ihu na -arụpụta ihe ọhụrụ na teknụzụ, imepụta akụrụngwa, imepụta ihe ọhụrụ na usoro njikwa ọhụrụ. Na-azụlite ngwaahịa ndị ọzọ na-efu ọnụ site na ihe ọhụrụ iji gboo mkpa nke mmepe n'ọdịnihu, wee nye ndị ahịa ngwa ngwa ngwa ngwa dị ọnụ ala bụ ebumnuche anyị na-adịghị akwụsị akwụsị.
CSJ ga-eji mkpa siri ike, teknụzụ dị elu, ogo a pụrụ ịdabere na ya, na ọrụ ịre ahịa zute mkpa ndị mmadụ n'otu n'otu na nke ngwa dị elu.